ကျိုက်ထီးရိုး တွင် ကေဘယ် ကားများကို လာမည့်နှစ် ဧပြီ ၁ ရက်၌ စတင် ပြေးဆွဲမည် | Danya Wadi
»သတင်းများ»ကျိုက်ထီးရိုး တွင် ကေဘယ် ကားများကို လာမည့်နှစ် ဧပြီ ၁ ရက်၌ စတင် ပြေးဆွဲမည်
ကျိုက်ထီးရိုး တွင် ကေဘယ် ကားများကို လာမည့်နှစ် ဧပြီ ၁ ရက်၌ စတင် ပြေးဆွဲမည်
Posted by danyawadi on December 20, 2016 in သတင်းများ
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထို မြို့နယ် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတွင် ကေဘယ်ကား (ကောင်းကင်ကြိုးရထား)ပြေးဆွဲခြင်းကို ၂၀၁၇ ဧပြီ၁ ရက်၌ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းပြုလုပ်သည့် Sky Asia Co.,Ltd. မှ သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ကေဘယ်ကား ပြေးဆွဲခြင်းကို ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ၌ Sky Asia Co.,Ltd. ကစတင်အကောင်အ ထည်ဖော်လျက်ရှိပြီး ကျိုက်ထီးရိုး ဘေးမဲ့တော နယ်မြေရှိ မြေ ၁၃ဒသမ ၅ ဧကကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွင် နှစ် ၇၀ စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘အခုလက်ရှိမှာ ဒီစီမံကိန်း အားလုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီ။ကေဘယ်ကား ပြေးဆွဲတဲ့အချိန် ကျရင် လူတစ်ဦး ကို ငွေ ဘယ် လောက်ယူမယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ် ရသေးဘူး။ ကေဘယ်ကားတစ်စီး ကို လူရှစ်ယောက် တင်လို့ရတယ်။
ရသေ့တောင်ကနေ ဘုရားအထိ ပြေးဆွဲမယ်။ ဘုရားပေါ်ကို ၁၀ မိနစ်လောက်နဲ့ ရောက်မယ်။ အန္တရာယ်မရှိစေ ဖို့ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်။
ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ် ၃၃ ကေဗီဓာတ်အားလိုင်းနဲ့ ပြေးဆွဲသွားမယ်’’ဟု Sky Asia Co.,Ltd. အထူးအကြံပေး အရာရှိ ဦးအောင်သန်းက ပြောသည်။
ဘုရားဖူးများ သဘာဝပတ် ၀န်းကျင် အလှအပများကို ကြည့် ရှုခံစားနိုင်ရန်၊ တည်းခိုနေထိုင် ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေရန် အဆိုပါ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်သန်း က ဆိုသည်။
ယခုအစီအစဉ်အတွက် ကေ ဘယ်ကားအစီးရေ ၄၃ စီးနှင့် အရန် တစ်စီးတို့ဖြင့် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ကုန်ကျခံပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ကေဘယ်ကားနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ကင်မွန်းစခန်းမှ ရသေ့တောင်အထိ ကားဖြင့် တက် ရောက်ပါက ကျပ် ၁,၅၀၀၊ ရသေ့တောင်မှ ဘုရားရင် ပေါ်အထိ ကျပ် ၁,၅၀၀ သုံးစွဲနေရသည်။
← ရခိုင်ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန် အင်ဒိုနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလား သို့ သွားမည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် ၍ ရခိုင်အရေး အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တွေ့ →